ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားသစ် Wish Upon (Movie Review) - Myanmarload
ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားသစ် Wish Upon (Movie Review)
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 18:46 July 26, 2017
Wish Upon ဇာတ်ကားသည် သရဲကားကြိုက်သူများ ထိတ်လန့်ကြောက်လန့်ဖွယ်ကြိုက်သူများအတွက် လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Wish Upon ဇာတ်ကားကို နာမည်ကျော် သရဲကားတစ်ကား ဖြစ်တဲ့ Annabelle ကားကိုရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာ John. R.Leonetti ကရိုက်ကူးထားသောကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ကောင်းကောင်း စိတ်ခြောက်ခြားမှုပေးနိင်တဲ့ ကားတစ်ကားပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း (Spoiler Warning)
အထက်တန်းကျောင်းသူလေးဖြစ်ကာ အသက်၁ရနှစ်အရွယ်ရှိ ကလဲယားဆိုသည့် မိန်းကလေးသည် ငယ်စဉ်ကမိခင်ဖြစ်သူသည် ကြိုးဆွဲသတ်သေသွားသလို ဖခင်ဖြစ်သူကလည်း ငွေရေးကြေးရေးအခက်ခဲကြောင့် အမှိုက်ပုံများတွင် ပစ္စည်းဟောင်းများလိုက်ကောက်သုူဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းကလူများက ကလဲယားအားနောက်ပြောင်လေ့ရှိသည်။ တစ်ရက်တွင် ကလဲယားဖခင်သည် အမှိုက်ပုံးတစ်ခုထဲမှာ တရုတ်ပစ္စည်းသေတ္တာတစ်ခုတွေ့ပြီး ကလဲယားအားပေးရာ ထိုဘူးလေးသည် တောင်းတဲ့ဆုကိုပြည့်စေသည်ကို ကလဲယားသိရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဆုတစ်ခါပြည့်တိုင်း ကလဲယားနှင့်သိသူတစ်ယောက် သေချင်းဆိုးနှင့်သေရာမှ ဆု၆ခုပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှတော့ ……….
Wish Upon သည် မမြင်တွေ့ရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ သရဲကိုရုပ်လုံးမပြဘဲ ထိတ်လန့်မှုကိုပေးတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ နာမည်ကျော် Final Destination ကားတွေလိုမျိုး ဘယ်ချိန် ဘယ်သူ ဘယ်လို သေမလဲဆိုတာ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နှင့် ကြည့်ရသည် ့ဇာတ်ကား အမျိုးအစားပင်ဖြစ်သည်။ ကြည့်တဲ့သူ စိတ်ကိုပင် တစ်ထိတ်ထိတ်ဖြစ်အောင်ဇာတ်လမ်းက ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သလို သရုပ်ဆောင်တွေကလဲ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားသည့်အတွက် ထိတ်လန့်သည်းဖိုကားကြိုက် ပရိသတ်များအဖို့ လက်လွှတ်မခံသင့်သော ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
Rotten Tomatoes – 21%
Myanmarload – 3/5